Gịnị Bụ asịwo Personas? Gịnị Mere Ha Ji Dị Ha Mkpa? Na Kedu ka I si kee ha? | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa na-arụkarị ọrụ iji mepụta ọdịnaya nke na-eme ka ha dị iche ma na-akọwa uru nke ngwaahịa na ọrụ ha, ha na-echekarị akara ngosi maka imepụta ọdịnaya maka nke ọ bụla ụdị nke onye na-azụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na atụmanya gị na-achọ ọrụ nnabata ọhụụ, ahịa na-elekwasị anya na ọchụchọ na ntụgharị nwere ike ịdị na arụmọrụ ma onye isi IT nwere ike ilekwasị anya na atụmatụ nchekwa. Ọ dị oke mkpa na ị ga - agwa ha abụọ okwu - ọ na - achọkarị ka ị gbasaa nke ọ bụla na mgbasa ozi na ọdịnaya a kapịrị ọnụ.
Na nkenke, ọ bụ banyere ịkesa izipu ụlọ ọrụ gị na nke ọ bụla ụdị banyere atụmanya ịkwesịrị ịgwa. Ihe atụ ụfọdụ nke ohere efu:
Mgbanwe - Otu ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ọdịnaya nke na-elebara saịtị ha anya karịa ịkọwapụta ndị na-eme mgbanwe. Ọ bụrụ na 1% nke ndị ọbịa na saịtị gị ghọrọ ndị ahịa, ịkwesịrị ịche 1% ahụ ma mata ndị ha bụ, ihe kpaliri ha ịgbanwe, wee chọpụta otu esi agwa ndị ọzọ dị ka ha okwu.
Industries - Ulo oru nke ulo oru na aru oru otutu ulo oru, mana ihe omuma ha na saiti ha na agwa ndi ahia n’ozuzu ha. Site na enweghị ụlọ ọrụ na njikwa ọdịnaya ha, atụmanya ndị na-eleta saịtị ha site na otu akụkụ enweghị ike iji anya nke uche ma ọ bụ chee etu ikpo okwu ga-esi nyere ha aka.
Positions - Ọdịnaya nke ụlọ ọrụ na-ekwu okwu na nsonaazụ azụmaahịa ha zuru oke nke ikpo okwu ha nyere ma na-eleghara ịkọwapụta otu ikpo okwu si enyere ọnọdụ ọrụ ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ahụ aka. Ndị ụlọ ọrụ na-eme mkpebi nzụta ọnụ, yabụ, ọ dị mkpa na a na-agwa ọnọdụ ọ bụla emetụtara.
Kama ilekwasị anya na akara gị, ngwaahịa, na ọrụ gị iji zụlite usoro nke ọdịnaya nke na-etinye nke ọ bụla, kama ị na-ele ụlọ ọrụ gị anya n'anya onye zụrụ gị wee wuo ọdịnaya na mmemme izi ozi nke na-agwa okwu ozugbo mkpali ha maka ibu onye ahia nke ika gi.
Gịnị bụ asịwo Personas?
Asịwo personas bụ chepụtara echepụta njirimara na-anọchite anya na ụdị nke atụmanya na azụmahịa gị na-agwa.
Brightspark Consulting na-enye nke a infographic nke a B2B asịwo Onyea:
Ihe Nlere nke Onye ahia
Akwụkwọ dị ka Martech Zone, dịka ọmụmaatụ, na-eje ozi ọtụtụ mmadụ:
Susan, onye isi ndị ahịa ahịa - Sue bụ onye na-eme mkpebi ma a bịa nzụta teknụzụ iji nyere ndị ahịa ụlọ ọrụ ya aka ịzụ ahịa. Sue na-eji mbipụta anyị iji nyocha ma ngwaọrụ nyocha.
Dan, onye isi ahia - Dan na-etolite atumatu iji mejuputa ngwa oru iji nyere aka ahia ha ma o choro ijide oru na ihe omuma ohuru.
Sarah, Onye Nwe Azụmaahịa Nta - Sarah enweghị ego ego iku ngalaba ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Ha na-achọ omume kacha mma na ngwa ọrụ adịghị ọnụ iji melite ahịa ha n’emebighị mmefu ego ha.
Scott, onye na-azụ ahịa teknụzụ ahịa - Scott na-anwa ilepụ anya maka ọhụụ kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọ na-etinye na ya.
Katie, onye ahia ahia - Katie na-aga ụlọ akwụkwọ maka ịre ahịa ma ọ bụ Mmekọrịta Ọha ma chọọ ịmatakwu ụlọ ọrụ ahụ ka o wee nwee ike ịnweta nnukwu ọrụ mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ.
Tim, onye na-enye teknụzụ Azụmaahịa - Tim chọrọ ileba anya na ụlọ ọrụ ibe ya nwere ike ijikọ ma ọ bụ ọrụ asọmpi.
Ka anyị na-ede akwụkwọ anyị, anyị na-achọ iji hụ na anyị na ụfọdụ ndị a na-ekwurịta okwu. N'ihe banyere post a, ọ ga-abụ Dan, Sarah na Katie anyị lekwasịrị anya.
Ihe atụ ndị a, n'ezie, abụghị nsụgharị zuru ezu - ha bụ naanị nyocha. Ezigbo profaịlụ nke onye nwere ike ma kwesiri ịbawanye na nghọta banyere akụkụ ọ bụla nke profaịlụ onye ahụ, ụlọ ọrụ, mkpali, usoro ịkọ akụkọ, ọnọdụ obodo, okike, ụgwọ, agụmakwụkwọ, ahụmịhe, afọ, wdg. dokwuo anya na nkwukọrịta gị ga - abụ n’ikwu okwu nye ndị ị chọrọ ịzụ.
Vidiyo na onye na-azụ ahịa
Nke a kediegwu video si Marketo nkọwa otu onye zụrụ ahịa nyere ha aka ịchọpụta ọdịiche dị na ọdịnaya yana otu esi echebara ndị na-ege ntị ntị nke nwere ike ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Marketo na-adụ ọdụ profaịlụ igodo ndị a kwesịrị itinye na Onye Zụrụ Onye:
aha: Aha mmadụ mepụtara nwere ike iyi nzuzu, mana ọ nwere ike ịba uru maka inyere otu ndị ahịa aka ịkọwa ndị ahịa ha ma mee ka ọ pụta ìhè karịa maka ịhazi otu esi erute ha
Age: Afọ ma ọ bụ afọ ole mmadụ dị na-enye ohere ịghọta ụdịrị njirimara pụrụ iche.
Mmasị: Kedu ihe omume ntụrụndụ ha? Kedu ihe ha na-achọ ime n'oge oge ha? Typesdị ajụjụ ndị a nwere ike inye aka kpụzie isiokwu nke ọdịnaya ha nwere ike itinye na ya.
Ojiji Media: Ihe ntanetị mgbasa ozi na ọwa ha na-eji ga-emetụta etu na ebe enwere ike iru ha.
Ego: Ego ha nwetara na njirimara ego ndị ọzọ ga-ekpebi ụdị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a na-egosi ha na ihe ọnụahịa ma ọ bụ nkwalite nwere ike ịbụ ihe ezi uche.
Affinities: Ọ bụrụ na ụdị ụfọdụ masịrị ha, nke a nwere ike inye nkọwa banyere ụdị ọdịnaya ha na-aza nke ọma.
Download Otu esi emepụta onye zụrụ ahịa na njem
Gịnị kpatara eji eji azụrụ ihe?
Dị ka infographic dị n'okpuru na-akọwa, iji onye zụrụ ahịa mee saịtị 2 gaa na 5 oge dị irè karị site na ịchekwa ndị ọrụ. Gwa ndị na-ege ntị okwu kpọmkwem na ọdịnaya gị ederede ma ọ bụ vidiyo na-arụ ọrụ nke ọma. Nwedịrị ike ịchọrọ itinye menu igodo na saịtị gị maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ.
Iji onye na-azụ ahịa na mmemme email gị na-abawanye pịa-site na ọnụego na ozi ịntanetị site na 14% na ọnụego ntụgharị site na 10% - na-akwọ ụgbọala 18 ugboro karịa ego karịa ozi ịntanetị mgbasa ozi.
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ahịa nwere maka ịmepụta ụdị mgbasa ozi ezubere iche nke na-eme ka ahịa na ntụgharị na-arịwanye elu - dị ka ụdị a hụrụ na Skytap - bụ onye na-azụ ahịa. Iji mụtakwuo banyere ihe onye na-azụ ahịa bụ na otu ha nwere ike isi melite nsonaazụ mgbasa ozi ahịa gị, lelee akwụkwọ ntanetị kachasị ọhụrụ nke otu ọka - Ebumnuche enwetara: Sayensị nke iwulite yerlọ Onye Ahụrụ.
Onye na-azụ ahịa na-eme ka ire ahịa dị mma, itinye aka na arụmọrụ yana ndị na-ege ntị na-echekarị ka ha na ndị ahịa ha na-ekwurịta okwu site na mgbasa ozi, mgbasa ozi ahịa, ma ọ bụ n'ime usoro ịre ahịa ọdịnaya gị.
Ọ bụrụ na ị nwere onye na-azụ ahịa, ị nwere ike inyefe ya n'aka ndị otu okike gị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, iji chekwaa oge ha ma nwekwuo ike ịzụ ahịa ọfụma. Otu ndi okike gi gha aghota uda, uzo, na uzo ozo - ghuta ebe ndi ahia na-achoputa n’ebe ozo.
Asịwo Personas, mgbe mapped na Yingzụta Journeys, na-enyere ụlọ ọrụ aka ịmata ọdịiche dị na atụmatụ ọdịnaya ha. N'ihe atụ m nke mbụ ebe onye ọrụ IT nwere nchegbu gbasara nchekwa, ugbu a, nyocha nke atọ ma ọ bụ asambodo nwere ike ịgụnye n'ahịa na mgbasa ozi iji mee ka onye otu ahụ nwee ahụ iru ala.
Otu esi emepụta onye ahịa
Anyị na-achọ ịmalite site na nyochaa ndị ahịa anyị ugbu a wee rụọ ọrụ iji laghachi na ndị na-ege ntị. Everyonetụ onye ọ bụla enweghị isi… cheta na ọtụtụ ndị na-ege gị ntị agaghị azụta gị.
Personmepụta mmadụ nwere ike ịchọ nyocha dị oke egwu na eserese eserese, nyocha agbụrụ, Ntanetị, iche iche iche, nchịkọta, nyocha, na data dị n'ime. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ na-elegara ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahịa ahịa anya nke na-eme igwe mmadụ, firmagraphic, na nyocha ala nke ndị ahịa ha, mgbe ahụ ha na-eme ọtụtụ ajụjụ ọnụ na ọnụ ọgụgụ na ndị ahịa gị.
N'oge ahụ, a na-ekewapụta nsonaazụ ya, ozi anakọtara, aha onye ọ bụla aha ya, ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ ịkpọ oku na-arụ ọrụ, yana profaịlụ arụpụtara.
Onye na - azụ ahịa ga - agaghachị ma mekwaa ka nzukọ gị gbanwere ngwaahịa na ọrụ ya wee nweta ndị ahịa ọhụụ na - adabaghị na njirimara gị ugbu a.
Tags: brightspark na-agba izuozuzu persona infographicasịwo onye videoonye zụrụ yaịzụ njemike asịwo personasihe atụ personasotú ike asịwo personasnjem ndị ahịa mapahịaprofaịlụ mmadunyocha mmadundị mmadụpanda siri ikeihe ndị asịwo personasgịnị mere na-eji asịwo personas